Distros: Obere, ọkụ, dị mfe ma bụrụ otu ebumnuche ka ọ bụ nke ọzọ? | Site na Linux
na Linux ụwa a na-enwekarị arụmụka dị mma banyere echiche dị iche iche, dị ka, Kedu nke kachasị mma Desktọpụ Environment (DE), nke kacha mma Njikwa Window (WM), nke kacha mma Onye njikwa mmalite (DM), ụdị kacha mma ma ọ bụ ụdị Kernel, ma n'ezie, ọ gaghị efu, nke kachasị mma GNU / Linux Distro, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ?
O doro anya, esemokwu ndị a agaghị enweta a azịza doro anya ma ọ bụ zuru ụwa ọnụ, ma ọ dịkarịa ala otu nzaghachi nnabata, ebe ọ bụ na n'ezie otu onye ọrụ ọ bụla nwere ike inwe ahụ iru ala ma nwee afọ ojuju site na anya, arụ ọrụ ma na-arụpụta ihe, yana nke kachasị amasị ha DE, WM, DM, Kernel ma ọ bụ Distro GNU / Linux. Yabụ na ọkwa a, anyị ga-enyocha isi okwu a, mana na Mgbasa ozi.
Mmemme ngwanrọ kacha mma maka GNU / Linux Distros nke 2020
Esemokwu ndị ọzọ, nke na-adịkarị na Linux ụwa Ha nwere ike ịbụ: Kedu ngwa nke ụdị kacha mma? Karịsịa nke Ọfịs Office, ihe nchọgharị orntanetị ma ọ bụ Egwuregwu. Ọ bụrụ na isiokwu ndị a na-amasịkarịkwa gị, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, ndị na-esonụ gara aga metụtara posts:
Ndị ọzọ kachasị mma maka n'efu na MS Office maka 2020
Fps: Egwuregwu egwuregwu kacha mma nke mbụ dị maka Linux
1.1 Kedu ka imirikiti dị ka GNU / Linux Distros?
1.2 Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na GNU / Linux Distros dị iche iche?
1.2.1 Mme mbụme
Kedu ka imirikiti dị ka GNU / Linux Distros?
N'ime ihe karịrị afọ 10 na-eji GNU / Linux, na ọ bụghị naanị otú ọkọlọtọ onye ọrụ (ụlọ ọrụ akpaaka) mana dika onye ọrụ dị elu (teknụzụ) Enwere m ike ikwu, na ọtụtụ n'ime Ndị ọrụ Linux ndị si na ha kpebiri iji GNU / Linux na-enwekarị a ihe omuma kọmputa zuru oke, na ndị site na "X ma ọ bụ Y" ọnọdụ, tinye aka na ọnọdụ nke iji GNU / Linux.
Ya mere, o kwenyere na ọtụtụ n'ime Ndị ọrụ Linux dakọtara na nke ugbu a ahịa nlereanya nke fọrọ nke nta niile nke GNU / Linux Distros, nke ahụ bụ, Nkesa a na-enye site na Obere ISO, n'etiti 1 ma ọ bụ 2 GB, maka nbudata ngwa ngwa ma jiri ya na obere draịva USB. Ihe nkesa dị mfe, pere mpe na otu, ya bu, na nhazi onodu ogugu na nke kachasi nma nke ndi mmadu nwere ike iji na komputa, ma ulo, ulo akwukwo ma obu ulo oru.
Nke a, iji nye ha, na-eji ohere ha nwere eme ihe elu ihe omuma kọmputa, magburu onwe Sistemụ arụmọrụ ịkpụzi ihe masịrị gị na mkpa gị.
Agbanyeghị, enwerekwa GNU / Linux Distros pụrụ iche Na ụfọdụ teknụzụ, ha na-enye ndị ọrụ akọwapụtara ntakịrị, dị njikere, maka ihe niile ha nwere mmasị na ya, ya bụ, Distros kachasị maka:
Ndị na-egwu anataghị ikike ma ọ bụ ndị ọkachamara,
Ndị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ ndị ọkachamara,
Omiiko banyere Nzuzo na Cybersecurity
Ndị na-emepụta ọdịnaya multimedia
SysAdmin ma ọ bụ ndị ọkachamara DevOps,
Ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nwere mmasị na Ngwuputa Dijitalụ ma ọ bụ Nnyocha Sayensị.
Ihe ndị a niile, n'agbanyeghị na ha bụ ọkachamara, na-adịkarị Obere, nkesa dị mfe ma dị ntakịrị.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na GNU / Linux Distros dị iche iche?
Ebee ka ndị ọrụ kọmputa ahụ nwere ihe ọmụma kọmputa ha na-ejedebe site na iji ngwa nke ụdị ọ bụla, na ha amaghị ma ọ bụ chọọ ịwụnye ngwa site na mpaghara dị iche iche, yana / ma ọ bụ onye njikọ ya na netwọkụ (ịntanetị) abaghị uru ma ọ bụ oke oke ma ọ bụ dị oke ọnụ?
Ihe GNU / Linux Distros dị maka ndị chọrọ iji GNU / Linux Distro nke na-anaghị enwu enyo, mana siri ike, ọ bụghị obere obere mana zuru oke mara mma, ọ bụghị otu ebumnuche kama ọ bụ ọtụtụ, na o doro anya na ọ bụghị obere nha mana nnukwu, nke na-enye ohere nke inwe otutu ihe, na enweghi ihe ma obu obere Intanet?
Ọ bụ GNU / Linux Distros enwere ndị ọrụ kọmputa chọrọ ihe niile njikere, yabụ, etinyere ha, ha nwere ike nwalee ma jiri ọtụtụ ngwa na ngwaọrụ dị ka o kwere mee (ndị na-ebi akwụkwọ, multifunctional, wifi, Bluetooth, ma ọ bụ ndị ọzọ) na kọmputa ha.
N'ime ndị ọrụ ahụ, enwere ọtụtụ ma ha na-ejikwa ya Windows, karịsịa Gbawara windo, jupụtara na ngwa, mechiri emechi na ngwa azụmaahịa gbawara, ọ bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị, dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, dị mkpa ma ọ bụ na ọ bụghị, mana na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ jikọtara ha na ya, na-egbochi ha ịga Linux ụwa. Ihe a niile na-ekwe omume n'ihi na, a Windows kọmputaNwere ike ịwụnye ma hazie ihe niile na-enweghị mkpa ịntanetị, ma ọ bụ jiri Windows nwere ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ narị ngwa jikọtara na DVD ma ọ bụ karịa.
N'ezie, GNU / Linux Distros dị ka Debian na Ubuntu, na-enye DVD ndị nwere ike ibudata na ngwugwu dị njikere iji wụnye, hazie ma bulie ma ọ bụrụ na ịnweghị Intanet ma ọ bụ nwee oke ma ọ bụ dị oke ọnụ, na ndị ọzọ Mint, Deepin, Elementary na Zorin Ha na-enye ihe dị mma ma dịgasị iche iche nke ngwa yana arụmọrụ na ọrụ ndị ọrụ enyi maka ọtụtụ.
Na ndị ọzọ na-amasị -Adị agwụ agwụ OS ha na-enye nnukwu ibu zuru ezu zuru ezu nke juputara na ngwa ndị dị njikere iji wụnye ma jiri akara-akara. Mgbe, Linux MX awade ezigbo mma Ndụ Distro na-enye gị ohere ịnwale ihe niile enyere tupu ịwụnye.
Ma, n'onwe dị ka echiche na post a, kere na ọ bụ oge dị ka iwu nke ndị mmepe nke Nne ma ọ bụ ihe mgbagha distros, ichikota uru ndia nile gbasasiri n'etiti otutu Distros, na ime ka onye oru profaịlụ ahu putara ihe, dika ndi ozo omenala ISO dị (obere, ìhè, dị mfe na otu ebumnuche) nke na-esote:
"Ndụ ISO dị ndụ ruo 4 GB nke enwere ike ịnwale ndụ, yana na mgbe etinyere ya, nyeworị onye ọrụ ahụ nchịkọta siri ike nke ngwa kacha ọtụtụ kacha mma na ọnụ ọgụgụ kachasị ekwe omume nke ndị ọkwọ ụgbọ ala na ụlọ akwụkwọ ọhaneze, maka ụdị ngwaọrụ niile na mpụga".
Ihe a niile, nke kacha mma nwere ike ịbụ maka ezi uche akụ oriri, nke na-ebelata mkpa ịwụnye, hazie ma bulie, ngwa na oke, site na ndị na-amaghị ọrụ GNU / Linux na ndị ọrụ ntanetị, ma si otú a na-ebelata ohere ọ ga-abụ na obere oge nsonaazụ ga-akpata gbanwee Distros ugboro ugboro ma ọ bụ laghachi Windows.
N'okwu m, ana m eji ya Linux MX, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na-enye m ohere gbalịa jiri ihe niile "dịrị ndụ" Ma mgbe arụnyere, ahazi, ahaziri na kachasị, enwere m ike ịmepụta ISO Live installable m uto na mkpa, na-edozi kpomkwem nsogbu nke ịntanetị ịlaghachi iji nweta ihe niile dịka m chọrọ na nsogbu nke itinye ego ogologo oge ntinye, nhazi na nhazi oge ọ bụla m ga-amalite site na ọkọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Distros GNU/Linux» na ya, olee otu ha di na uzo ndi ozo ha kwesiri inye; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Distros: Obere, ọkụ, dị mfe ma bụrụ otu ebumnuche ka ọ bụ nke ọzọ?
Otu isiokwu ga - adị mma ebe ngwaọrụ MX Linux wetara na otu esi eji ya mara, yana na isos zuru oke na ngwa ọrụ niile n'otu n'otu ka ọtụtụ ndị jiri Linux
Ekele, Michael. Enwere m olileanya na isiokwu a na-enye gị ozi dị mkpa gbasara MX Linux na otu esi eji ya mee ISO gị: https://blog.desdelinux.net/mx-snapshot-como-crear-respin-personal-instalable-mxlinux/
Kedu ihe dị njọ na ndị Windows chọrọ ịmata GNU / Linux?
Ga-aghọta na GNU / Linux maka desktọọpụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu; iru ogo dị ka Windows dị.
Agbanyeghị na ọ dị mma na ha chọrọ ịma GNU / Linux site na distro nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile enyere.
Mgbe ahụ ọ bụrụ na ha chọrọ distros d̶e̶ ̶p̶r̶o̶f̶e̶s̶i̶o̶n̶a̶l̶e̶s̶ nke chọrọ ihe ọmụma na ọnụ dị ọcha, ha ga-ahọrọ ya.
Ọ dịghị onye na-ejighị CMD ma ọ bụ Terminal ga-achọ iji akara iwu dị ọcha na-enweghị eserese eserese.
Have ga-ahụ ezigbo akụkụ nke GNU / Linux ma e jiri ya tụnyere Windows: ị nwere ike gbanwee ihe niile dịka ọ masịrị gị.
Ekele, A47. Daalụ maka okwu gị. Ee ee, nke ahụ bụ echiche ahụ, rịọ maka Linux Distros siri ike All-in-one nke enwere ike iji ya dịrị ndụ maka nnwale, yana na mgbe etinyere ya, nye nnukwu nnakọta nke ngwa dị iche iche, echiche niile nke ndị ọrụ GNU na ndị na-enweghị uche. / Linux, ma ndị chọrọ ịnwale ọtụtụ ihe niile, na ihe niile ihe niile na-arụ ọrụ ekele maka nkwado dị ukwuu nke ụlọ akwụkwọ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ gụnyere.
A na-ekpe Google ikpe maka ịnakọta data na nzuzo site na ndị ọrụ gam akporo